किन छुटाइए सागमा गौरवाशाली पदक जित्ने खेलाडीहरु मान पदवी र अलं’कारबाट…हेर्नुहोस् । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
किन छुटाइए सागमा गौरवाशाली पदक जित्ने खेलाडीहरु मान पदवी र अलं’कारबाट…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं : शब्दमा सम्मान गर्न कुनै क’ञ्जुस्याई गरिदैन । धेरै वि’शेषण भरेर पुलकित गराइन्छ । तर वास्तविक सम्मान गर्नु पर्दा कुन हदसम्म क’ञ्जुस्याई गरिन्छ भन्ने यसपटक प्र’ष्ट देखायो राज्यले ।
गर्विलो पदकका साथ नेपालमा सम्पन्न १३ औं सागमा नेपाली खेलाडीहरुले राष्ट्रलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाउँदा सम्मानका शब्द यति खर्च गरिए तर रा’ष्ट्रपतिकोतर्फमा मान पदवी अलंकारको घोष’णा हुँदा सागमा कीर्ति’मानी पदक दिलाउन सफल धेरै खेलाडी त्यस्को लागि योग्य समेत सावित हुन सकेनन्।
हरेक वर्षझै यस वर्ष पनि सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा मुलुकलाई विभिन्न क्षेत्रबाट महत्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिहरुलाई वि’भुषित र पदक दिने घो’षणा ग¥यो । यसपटक पनि करिब ६ सय जनालाई विभुषित र पदक दिने घो’षणा गरेको छ ।
तर, १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा मुलुकलाई ऐतिहासिक सफलता दिलाउने पदक विजेता खेलाडीहरु राज्यको त्यो मानपदवीको सू’ची भित्र अटाएनन् । उसो त युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत साउनमा मानपदवी, अलंकार र पदकबाट सम्मान गर्न सागका स्वर्ण विजेता खेलाडीलाई फारम भर्न उर्दी जारी नै जारी ग¥यो ।
तर, संविधान दिवसको दिन राष्ट्रपतिबाट नेपालका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई मानपदवी अलंकार र पदकद्वारा विभुषण घोषणा हुँदा खेलकुद क्षेत्रबाट जम्मा १९ जना मात्रै समावेश भए।
जसमध्ये राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाल, राखेपका प्रशासन विभाग प्रमुख कुलबहादुर थापा, ओलम्पियन संगिना वैद्य र तेक्वान्दो प्रशिक्षक तुलसी गौतम थिए भने बाँकी १५ जना सागमा स्वर्ण जितेका खेलाडी हुन् । तर, उनीहरू पनि विभागबाट सिफारिस भएका थिए ।
तर ४ स्व’र्णसहित सात पदक दिलाउने ज’लपरी गौरिका सिंह के पदकका लागि सुहाउने पात्र थिइनन र ? २ स्वर्ण दिलाउन तेक्वान्दो कि आयशा शाक्य योग्य थिइनन र ? र , २ स्वर्ण दिलाउने कराँतको मण्डे’काजी श्रेष्ठ सरकारको नजरमा किन परेनन ? यो प्रश्न अहिले नेपाली खेलजगतमा चर्को बहसको विषय बनेको छ ।
राज्यको उपेक्षामा परेपछि की’र्तिमान कोर्दै स्वर्ण दिलाउने खेलाडीहरु निराश छन् । देशका लागि पदक जितेको अर्थ राज्यले सम्मान गरेपछि मात्र हुने उनीहरुको बुझाई छ । उसो त सागमा पदक विजेता सबै खेलाडीलाई विभू’षित गर्न सकिने बताइएको थियो । तर, खेलकुद मन्त्रालयले कोटा बढाउनेको विषय र पदक विजेता खेलाडीलाई सिफारिस गर्न मन्त्रालयमार्फत पहल नगरेको खुल्न आएको छ ।
१३औं सागमा नेपालले ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९६ कास्य जितेको थियो । जुन सागको ईतिहासमा नेपालले हात पारेको अहिलेसम्मै सर्वाधिक ठूलो सफलता हो । तर, यी पदक जित्नेको भीडमा केबल विभागीय निकायको सिफारिसलाई मात्र महत्व दिनु के विवेकसंग निर्णय हो र रु के विभाग भन्दा बाहिरबाट खेल्ने खेलाडी खेलाडी होइनन रु गौरिकाहरुले दिलाएको सफलता गर्व गर्न धक नमान्ने सरकारले जवाफ दिने छ नै ।News24 Nepal बाट ।
Previous पूर्व जानकारी बिना नै बिजुली का’टिए तु’रुन्तै खबर गर्नुहोस्:-उर्जा मन्त्रालय ,हेर्नुहोस।
Next जुम्लामा अनशनरत डा. केसी काठमाडौं आउँदै, स’त्याग्र’ह कायमै राख्ने अब सुन्ला त सरकारले?…हेर्नुहोस् ।